Halyeey Liverpool ah oo kula taliyay Harry Kane inuu ka tago Tottenham Hotspur! – Gool FM
Dajiye February 28, 2021
(London) 28 Feb 2021. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Danny Murphy ayaa shaaca ka qaaday fikirkiisa ah in Harry Kane ay tahay inuu ku fikiro loolan kale cusub ee ka baxsan naadiga Tottenham Hotspur.
Danny Murphy wuxuu carabka ku adkeeyay in haddii uu Harry Kane go’aansado inuu daacad u sii noqdo kooxdiisa Tottenham Hotspur ilaa iyo dhamaadka, inay ku qaadan doonto waqti badan hamigiisa ah ku guuleysiga koobab.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa soo bandhigay maqaal uu qoray halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Danny Murphy, wuxuuna yiri:
“Waxay u noqon doontaa Xagaa wanaagsan Harry Kane, hadii uusan ka tagin Tottenham hada, waligiis ma tagi doono.”
“Wuxuu soo afjari doonaa waayihiisa ciyaareed isaga oo haysta rikoorka xiddiga ugu goolasha badan kooxda, waxaana taalo loogu dhisi doono garoonka banaankiisa, haddii uu go’aansado in uu sii joogo, laakiin taasi waxay ka hor imaaneysaa ku guuleysiga tartamada maadaama ay tayadiisa u qalanto.”
“Waan hubaa inuu maalin walba ka fikiro, sababtoo ah waqtiga ma ahan dhankiisa, hadda wuxuu ka mid yahay saddexd weeraryahan ee ugu fiican adduunka wuuna horumarin karaa koox walba.”
“Laakiin waxa uu noqon doonaa 28 jir xagaagan, iyadoo ay sidoo kale joogaan xiddigaha Erling Haaland iyo Kylian Mbappe oo leh awood sii kordheysa oo soo jiidata kooxo caan ah sannad kasta.”
“Kane wuxuu si cad u jecel yahay Spurs, wuxuuna doonayaa inuu fursad kasta siiyo Jose Mourinho xilli ciyaareedkan, laakiin waxay aad uga fog yihiin inay u tartamaan hanashada Premier League ama Champions League, marka haatan waa waqtigii go’aan la gaari lahaa.”
“Ma wuxuu doonayaa inuu noqdo sidii Thierry Henry oo ka tagay Arsenal kuna biiray Barcelona isla markaana ku guuleystay Champions League? Ama, sida Jamie Vardy, oo iska joogay Leicester City markii ay doonayeen kooxo kale, isagoo kula guuleysan lahaa koobab badan, laakiin dadku way xusuusnaan doonaan inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican kooxda Leicester City?.“